ပင်လယ်စာလိုလိုအမှတ်မှားနေကြတဲ့ ကျောက်ပွင့်အဖြူ ရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက်စွမ်းပကားများ – Askstyle
ပင်လယ်စာလိုလိုအမှတ်မှားနေကြတဲ့ ကျောက်ပွင့်အဖြူ ရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက်စွမ်းပကားများ
Sea weed မဟုတ်​ပါဘူး။
​ကျောက်​ပွင့်​ရဲ့​သွေး​ကြောရှင်း​ပေးနိုင်​တဲ့အာနိသင်​ကိုသိလာကြတဲ့အတွက်​အ​နောက်​နိုင်​ငံကလူ​တွေဟာTissue culture နည်းနဲ့ကိုယ်​ပိုင်​စိုက်​ပျိုး​ရေး​တွေအကြီးအကျယ်​လုပ်​လာကြပြီဖြစ်​ပါတယ်​။မူလက​တော့ဝက်​ဆီတအားစားတဲ့တရုတ်​​တွေရဲ့Traditional Nutrition ဖြစ်​​ပေမဲ့အခု​တော့ကမ္ဘာကသိပြီဖြစ်​လို့စားကုန်​ကြပါပြီ။ကျ​နော်​တို့မြန်​မာ​တွေ​ရော….? ကျ​နော်​တို့မြန်​မာ​တွေမသိကြဘူးဗျ။
​ကျောက်​ပွင့်​ကိုအရသာရှိ​အောင်​နည်းမျိုးစုံလုပ်​စားလို့ရပါတယ်​။သုတ်​စားရင်​လည်း​ကောင်းတယ်​၊​ဟော့​ပေါ့ထဲထည့်​စားလည်း​ကောင်းတယ်၊သ​င်္ဘောသီး​ထောင်းထဲထည့်​လည်း​ကောင်းတယ်​၊မာလာရှမ်း​ကောတို့မာလာဟင်းတို့ထဲမှာလည်းထည့်​စားလို့ရတယ်​​၊​ဆေးဖြစ်​ဝါးဖြစ်​ဒီအတိုင်း​ရေစိမ်​စားလည်းရတာပါပဲ။ကျ​နော်​က​တော့​ကျောက်​ပွင့်​ကိုပါးပါး​လေးဖြစ်​​အောင်​ကပ်​​ကြေးနဲ့ညှပ်​လိုက်​တယ်​၊ပြီး​တော့ sea food အစုံဟင်းချိုထဲမှာထည့်​ပြီးစားတယ်​။ထုတ်​ထုတ်​ ထုတ်​ထုတ်​ နဲ့အင်​မတန်​စားလို့​ကောင်းပါတယ်​။ငှက်​သိုက်​​လေးဝါးရသလိုပါပဲ။မိတ်​​ဆွေတို့လည်းနှစ်​သက်​သလိုစားနိုင်​ကြပါတယ်​။ရမယ့်​အကျိုး​ကျေးဇူးက​တော့အများကြီးပဲဗျ…….
စာအုပ်​ – ဓာတ်​စာ
​ရေးသူ – မင်း​ကျော်​ဝင်း
Sea weed မဟုတျပါဘူး။
ကြောကျပှငျ့ရဲ့သှေးကွောရှငျးပေးနိုငျတဲ့အာနိသငျကိုသိလာကွတဲ့အတှကျအနောကျနိုငျငံကလူတှဟောTissue culture နညျးနဲ့ကိုယျပိုငျစိုကျပြိုးရေးတှအေကွီးအကယျြလုပျလာကွပွီဖွဈပါတယျ။မူလကတော့ဝကျဆီတအားစားတဲ့တရုတျတှရေဲ့Traditional Nutrition ဖွဈပမေဲ့အခုတော့ကမ်ဘာကသိပွီဖွဈလို့စားကုနျကွပါပွီ။ကနြျောတို့မွနျမာတှရေော….? ကနြျောတို့မွနျမာတှမေသိကွဘူးဗြ။
ကြောကျပှငျ့ကိုအရသာရှိအောငျနညျးမြိုးစုံလုပျစားလို့ရပါတယျ။သုတျစားရငျလညျးကောငျးတယျ၊ဟော့ပေါ့ထဲထညျ့စားလညျးကောငျးတယျ၊သင်ျဘောသီးထောငျးထဲထညျ့လညျးကောငျးတယျ၊မာလာရှမျးကောတို့မာလာဟငျးတို့ထဲမှာလညျးထညျ့စားလို့ရတယျ၊ဆေးဖွဈဝါးဖွဈဒီအတိုငျးရစေိမျစားလညျးရတာပါပဲ။ကနြျောကတော့ကြောကျပှငျ့ကိုပါးပါးလေးဖွဈအောငျကပျကွေးနဲ့ညှပျလိုကျတယျ၊ပွီးတော့ sea food အစုံဟငျးခြိုထဲမှာထညျ့ပွီးစားတယျ။ထုတျထုတျ ထုတျထုတျ နဲ့အငျမတနျစားလို့ကောငျးပါတယျ။ငှကျသိုကျလေးဝါးရသလိုပါပဲ။မိတျဆှတေို့လညျးနှဈသကျသလိုစားနိုငျကွပါတယျ။ရမယျ့အကြိုးကြေးဇူးကတော့အမြားကွီးပဲဗြ…….
စာအုပျ – ဓာတျစာ
ရေးသူ – မငျးကြျောဝငျး